फाइनान्स कम्पनीको नाफामा देखिन थाल्यो चमक, कुन कम्पनीको कति ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > फाइनान्स कम्पनीको नाफामा देखिन थाल्यो चमक, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौं । सञ्चालमा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्था प्रकाशित गरिरहेका छन् ।
अहिलेसम्म १८ वटा कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेका छन् । अहिलेसम्म यी कम्पनीको नाफा ५४.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १ अर्ब १८ करोड ४० लाख ८ हजार रुपैयाँ रहकोमा चालु आवको सोही अवधिमा आइपुग्दा ५४.९८ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ८३ करोड ५० लाख ४८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
नौ महिनाको अवधिमा १८ वटा कम्पनीमा ६ वटा कम्पनीको नाफा घटेको छ भने बाँकी कम्पनीको नाफा बढेको छ । नाफा घटेका कम्पनीमा नेपाल फाइनान्स, मल्टिप्रपोज, जानकी, समृद्धि, श्री इन्भेष्टमेन्ट र प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको नाफा घटेको छ भने अरु कम्पनीको नाफा बढेको छ ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय अवस्था हेर्दा सबैभन्दा धेरै मञ्जुश्री फाइनान्सको रहेको छ । चैत समान्तसम्म कम्पनीले ३७ करोड ५१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ९४.१५ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको नाफा १९ करोड ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
प्रतिशतको आधारमा हेर्दा ललितपुर फाइनान्सको सबैभन्दा बढी २८८.६६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै गोर्खाज फाइनान्सको नाफा २६६.६७ प्रतिशतले बढेको छ ।
चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्मा सबैभन्दा थोरै नाफा नेपाल फाइनान्सको रहेको छ । उक्त कम्पनीको नाफा गत वर्षको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा ८८.७९ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष ३ करोड १२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको कम्पनीले यो वर्षको तेस्रो त्रैमासम्ममा ३५ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा आर्जन गरेको छ ।
२०७८ जेष्ठ १ गते १३:२० मा प्रकाशित
बिजुली किन्न नेपालसँग जीएमआरको गुहार
हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोगद्वारा प्रकाशित अत्यन्त जरुरी सूचना
कोरियाली भाषा परीक्षा आगामि जेठमा